Ihe mmebi ahụ. Kedu ihe ọ bụ, olee otu o si arụ ọrụ na otu ọ dịruru mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
El mmetụta coriolis A na-akpọkarị ya na sayensị iji zoo aka na ntụgharị nke mmiri na ikuku nwere n'akụkụ dị iche iche. E kwuru na oké ifufe na ifufe na-agbagharị otu ụzọ na mgbago ugwu na ụzọ ọzọ na mpaghara ndịda. Gịnị kpatara nke a? Otu ihe a na-aga maka mmiri mmiri na ọbụna eziokwu a ma ama nke na-abụghị nke mmiri mposi na mpaghara dị iche iche. Ihe niile a na-eme site na mmetụta coriolis.
Wantchọrọ ịmatakwu banyere mmetụta coriolis a? Lee anyị ga-akọwara gị ihe niile.
1 Gịnị bụ coriolis utịp
2 Coriolis mmetụta na ihu igwe na oceanography
3 Gini mere oke ifufe ji na-eche ihu na uzo ozo?
Gịnị bụ coriolis utịp
Onye nchọpụta nke na-ahụ maka ịkọwa mgbakọ na mwepụ bụ Gaspard-Gustave Coriolis. Ọ bụ ekele maka nke a na ọ na-enweta aha a ma ọ bụghị ọzọ. Achọpụtara ya na 1935 ma nyere aka ịmatakwu banyere mbara ala na mbara igwe. N'ime mmeghari rotary niile enwere ike coriolis.
Mmetụta a dị mfe ịkọwa. Ọ bụ ike na-apụta n'ihi ntụgharị nke ụwa nwere n'elu ya. Ntughari a na - eme anyi ka ehihie na abali. N'ihi ntụgharị a, ụzọ nke ihe ndị na-efe n'elu ụwa na-agbagọ. O doro anya ma ọ bụrụ na anyị eme ya na ihe na-agbanwe ngwa ngwa. Ya mere, Earthwa. Agbanyeghị, n'ihi ike ndọda, anyị anaghị achọpụta na ụwa na-agbagharị na-aga n'ihu na-enweghị ịkwụsị.
Zọ ebumnuche nke ihe na-agbago n'aka nri maka ihe niile dị na ugwu ugwu na n'aka ekpe maka ihe niile dị na ndịda ọwụwa anyanwụ. Nke a bụ ihe kpatara na ebili mmiri na ebili mmiri na-aga n'akụkụ dị iche iche dịka ha dị n'otu ugwu ma ọ bụ ọzọ.
Mgbe mmetụta a na - eme, osooso metụtara ahụ na - adị na - agbatị ọsọ ọsọ ọ na - ebu ugbu a. N'ihi ya, Dabere na ọsọ nke ihe ahụ na-agagharị, mmetụta nke coriolis ga-adịwanye ike ma ọ bụ na ọ gaghị.
Coriolis mmetụta na ihu igwe na oceanography
A kọwara ikike nke coriolis na akwụkwọ sayensị mbụ mgbe ịchọtara ya dị ka ike ikuku. Ike a bụ nke ahụ na -agagharị na-emetụta usoro nke dị ka ntụpọ na ntụgharị. Nke a bụ ihe na-eme na ụwa. Ka anyị wee ghọta ya nke ọma, ọ dị ka idobe marble na gia nke na-agagharị. A ga-agbanwe trajectory ya dabere na ọsọ nke marble ahụ, ebe ọ bụ na anyị ga-eche na ọsọ ọsọ nke gear na-agagharị mgbe niile. Nke a na-eme na ọsọ nke ntụgharị ụwa, ọ na-adịgide adịgide.
N'ihi nke a, ntụgharị na etu esi kpọpụta ya na traject nke ihe ndị dị n'elu ụwa ka a ga-echekwa site na ọsọ ahụ. Anyị ga-enyocha ịdị mkpa nke mmetụta a na ngalaba nke ihu igwe na oke osimiri.
Mgbe oke ikuku ma ọ bụ mmiri na-aga, ha na-eso meridians nke ụwa. Ya mere, a na-agbanwe ọsọ ọsọ ya yana trajectory site na arụmọrụ nke mmetụta coriolis.
Mmetụta a na-enyere anyị aka ịmata na mgbe ọ bụla enwere usoro na-agbagharị, ndị na-agba ume ga-agbaso ọdịdị ahụ akọwapụtara. Nke a na - eme na oke ifufe na anticyclones na ụwa ọ bụla ma ọ bụghị naanị n’elu ụwa. Ọzọkwa, ike coriolis na-apụta site na ntụgharị nke anyanwụ na kpakpando.
Mmetụta a na-ewere ọnọdụ n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ karị na equator ebe ọ bụ mpaghara ebe ọsọ ọsọ kachasị ukwuu. Na okporo osisi na ọ bụ iji nwayọọ. Nke a bụ n'ihi na na ikuku akara ugwu, ebe dị anya n'etiti ụwa ka ukwuu.
Gini mere oke ifufe ji na-eche ihu na uzo ozo?
Efere ndị nwere ọdịdị dị mma karị, dịka ọdọ mmiri North Atlantic na South, mmetụta ya na-eme ka mmiri mmiri na-asọgharị. N'ebe ugwu ụwa, ọ na-echigharị ha n'aka nri ma n'akụkụ ndịda n'akụkụ aka ekpe. Otú ahụ ka ọ dịkwa ifufe.
Ma asịrị na-agbasa banyere ụlọ mposi na Australia bụ ụgha kpamkpam. Ha anaghị agagharị na ntụgharị dị ka ha na-eme na ụwa ndị ọzọ n'ihi mmetụta a. Ọ bụrụ na nke a emee, ọ bụ n'ihi na ndị nrụpụta wuru ha ka ha na-agbagharị n'ụzọ ahụ.
N'aka nke ọzọ, ndị na-agbagharị n'akụkụ nke ọzọ n'ihi mmetụta nke coriolis bụ ajọ ifufe. Oké ifufe ndị a na-atụle ọtụtụ kilomita na ọ nwere ike bụrụ na ndị oke ha nọ n'akụkụ dị iche iche. Mgbe nke a mere, ha ga-atụgharị n'akụkụ nke ọzọ n'akụkụ ọ bụla, ebe ọ bụ na njedebe ọ bụla ga-enwe ọsọ dị iche ka ụwa na-atụgharị. Ya mere, ajọ ifufe na-emecha gbasaa.
N’ihe banyere ụyọkọ kpakpando, ike ndọda na-eme ka etiti ụyọkọ kpakpando dị na nnukwu oghere ojii nke na-agbagharị ma na-adọta okwu niile dị gburugburu. O sina dị, ike ndọda na-ebelata ka anyị na-esi na etiti ụyọkọ kpakpando pụọ. Nke a na-ebelata ihe eji eme ihe na -emepụta mmetụta na-agagharị. Ka anyị ghara ichefu na etiti ụyọkọ kpakpando bụ a nwa onu.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ abụghị ihe na-edozi, ihe nkporita bu ihe di oke nkpa. Ọ na-eme n'ọtụtụ ihe dị iche iche n'ụwa ma ọ bụ maka mmegharị nke ikuku na ebili mmiri. Nke a bụ ihe dị mkpa ịtụle mgbe ị na-eme atụmatụ ụzọ ụgbọ elu nke ụgbọ elu azụmahịa.
N'ihi ihe ọmụma a, ọ ga-ekwe omume ịghọta ọtụtụ ihe banyere ike nke ụyọkọ kpakpando, ikuku ikuku na mmiri mmiri. Na ihu igwe ka eji ya amụma nke ihu igwe ndị a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị maara karịa banyere mmetụta coriolis
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Coriolis mmetụta